Al-shabaab oo doortay Hogaamiye Cusub! Waa Kuma? – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 On May 26, 2018
Hornafrik-Warar aann heleyno ayaa sheegaya in Ururka Al-shabaab oo wayaadan danbe la tilmaamayo inuu aad u xanuunsanyahay hogaamiyahoodi Axmed Diiriye abu Cubeyda ku kala qeybsameen cida u qabaneysa hogaanka guud , kala qeybsanaan mudo irtay kadib na qeyb kamid ah xubnaha Al-shabaab ay doorteen Hogaaiye kaasi oo la sheegayo in aysan ku qancin ragi sido kale xilkaasi isla rabay.
Mudo bilooyin ah ayaa lagu waramayaa inuu xanuunsan yahay Axmed Diiriye Abuu Cubeyda hogaamiyihii Al-shabaab ee ka danbeeyay midkii ka dilay ee Axmed cabdi Godane balse ku magacaabi jiren Muqtaar Abuu Zubeyr.
Faahfaahinnada xanuunka haya Hogaamiyahii Al-shabaab abuu cubeyda waa ay yar yihiin weeyna adagtahay in si buuxda loo helo.
Dadka qaar ee la dhihi karo waa ay heli karan xogtiisa waxay shegayan in uu la il daran yahay dhaawac ka soo garaay mid kamid ah weraad lala beegto Al-shabaab , Halka qaar na ay shegayaan in xanuun dhanka kiliyaha uu hayo.
Buuq badan ayaa ka dhex dhashay xubnaha sare ee Al-shabaab waxaana dooda ahayd labo arimood waa tan hore e talada iyo amarka cida laga qaadanayo mar hadii hogaamiyihi xanuunsanyahay tan labaad oo ah shaqsiga badali doona Axmed Diiriye oo ay xanuunkiisa u arkeen mid ay adagtahay in uu ka cafimaado.
Xubnaha sida aadka ah u doon doonayay xilka hogaanka guud ee Al-Shabaab ayaa kala ah sida ilo wareedyo noo xaqiijiyeen.Shiijh Ali Maxamuud Raage Cai dheere , Mahad Maxamed Warsame Karataay , iyo Shiikh Xuseen Cali Fiidow.
Xubnaha Al-shabab ayaa dood dheer kadib lagu waramayaa in ay hogaamiye u doorteen Shiikh Xusen Cali Fiidow , halka la tilmaamayo in aysan go’aankaasi ku qancin ragi doonayay in ay xilkasi qabtaan ee Shiikh Cali Maxamuud Raage Cali Dheere iyo Mahad Maxamed Warsame karataay.
Shiikh Xuseen Cali Fiidow oo gara kamid ah Shabaab u doorteen inuu hogaamiye noqdo ayaa waxaa uu horey u ahaa madaxda Siyaasada iyo xeriirka Gobolkada ee Al-shabaab waxana uu hogaamiye noqonaya iyadoo uu xanuunsanyahay Axmed Diiriye Abuu Cubeyda oo aha hogaamiyaha shabaab.
Ka sukoow raga madaxda u ah Al-shabaab warar ayaa sheegaya indagaalamayaal badan ka xanuunsanyihiinururka kuwaasi oo aysan heli Karin meel ay daawo doontaan madamada la bar garanayo.
1-dii September 2014 ayaa gantaal ay soo rideen diyaradaha mareykanka lala beegsaday hogmaiyihii mudada dheer Al-shaab u talinayay ee Axmed Cabdi Godane maalomo kadib ayayna , shabaabku war soo saren ku sheegeen in ay hogaamiye u doorteen Axmed Diiriye Abu Cubeyda.
Madaxda Galmudug oo khilaaf horleh soo dhex galay.